နယ်အပိုင်စား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နယ်အပိုင်စား
Posted by padonmar on Dec 21, 2014 in Creative Writing | 14 comments
-`ဆရာမရေ၊ဒီဂျာနယ်ထဲကြည့်စမ်းပါအုံး၊ကျူးကျော်တဲတွေကို လူအင်အားသုံးဖျက်တယ်တဲ့။ကျူးကျော်တဲ့လူကလည်း ကျူးကျော်တယ်။ဖျက်တဲ့လူကလည်းဖျက်တယ်။ မဟာပထ၀ီမြေကြီး ကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ ပြောရင် မြေကရယ်မယ်ဆိုတာ မကြားဖူးကြဘူးလားမသိ၊´
-`ဟုတ်ပါ့နော်၊ကျမတို့ငယ်ငယ်က ပွဲကြည့်ကြရင် လူ၎ယောက် စုစုလေးထိုင်ရတဲ့ ဖျာကို ဘေးဖျာကလူ မတိုးအောင် အသေအလဲကာကြ၊တိုးတဲ့လူကလည်း မသိမသာ ပေါင်ကားပြီးတိုး ဆိုတာတွေ သတိရမိသေးတော့၊ပွဲပြီးတော့လည်း ဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်တော့ဘူး။
အဲဒါပြောတာပေါ့၊ဝေဘူဆရာတော်ကြီးအကြောင်းမှာ ထင်တယ် ဆရာတော်ကြီးကို လာဖူးတဲ့သူက တပည့်တော် နယ်ပိုင်ကြီးပါဘုရား ဆိုတော့ အင်း၊တကာကြီးတို့များ တော်ပါပေ့၊ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မပိုင်သေးပါဘူး လို့ မိန့်တာလေးသတိရမိပါရဲ့၊ကဲ စကားလည်းကောင်းတယ်။ကားတွေပိတ်နေပြီ၊၄နာရီလည်းထိုးတော့မယ်။ခုကတည်းက တိုးထွက်ထားမှ အိမ်ကိုမမှောင်ခင်ပြန်ရောက်မယ်။သွားပြီနော်´
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကားပိစိလေးကို တန်းစီတိုးနေတဲ့ ကားတန်းကြားထဲ တိုးဝင်ရင်း ဆိုင်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကနေ ပေ၃၀၀ လောက်ပဲဝေးမယ့် ကံ့ကော်လမ်းမကြီးထိပ်ကို ရောက်ဖို့ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ၁၅မိနစ်လောက် မောင်းယူရပါတယ်။လမ်းထိပ်ရောက်ခါနီးကျတော့ ဘယ်ဖက်ချိုးမယ့် ကုန်ကားကြီးရဲ့ဘေးမှာရပ် ညာဖက်ချိုးမယ့် ကုန်ကားကြီးနောက်က ကပ်ပြီး လမ်းမပေါ်တက်ခွင့်ရဖို့ စောင့်နေရပါတယ်။လမ်းမကြီးပေါ်က ကားတွေကလည်း မပြတ်တန်းသွားနေပါတယ်။၅မိနစ်လောက်နေတော့ ကိုယ့်ကားပိစိလေးရဲ့ညာဖက် ခါးလယ်လောက် ပွဲရုံတခုရဲ့ ရှေ့မြေကွက်လပ်မှာ တောင်းအေ့စ်ပစ်ကပ်တစီး လာကပ်ရပ်လိုက်တာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။
လမ်းမကြီးပေါ်က ကားတချက်အပြတ်မှာ ကိုယ့်ရှေ့က ညာဖက်ချိုးမယ့်ကားကြီး ရွေ့သွားပါပြီ။
ကိုယ်ပါ တပါတည်းတိုးထွက်ဖို့ Neutral မှာထားထားတဲ့ ဂီယာကို ပြန်အရွှေ့မှာ တီကနဲ ကားဟွန်းတီးသံနဲ့အတူ ကိုယ့်ညာဖက်က တောင်းအေ့စ်က မရှိမဲ့ရှိမဲ့လမ်းကျန်ကနေ အတင်းကိုယ့်ရှေ့ကျော်မောင်းတက်လိုက်ပါတယ်။ရွေ့တော့မယ့်ကားကို ကမန်းကတန်း ဘရိတ်ပြန်အုပ်ရင်း ဒေါသနဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ကိုယ်သာ လက်သွက်ခြေသွက်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ ငြိပြီးပြီ။ငါ့နောက်မှလည်းရောက်သေးတယ်။ငါ့နေရာကိုလည်း ဟွန်းတီးပြီးလုယူသွားသေးတယ်လို့ စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့။အဲဒီတုံးမှာပဲ မနက်က ကြိုက်လွန်းလို့ Share လိုက်မိတဲ့ ကိုကျော်သူ(wka) ရဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက ပလပ်စတစ်အမှိုက်ပုံပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြင်လိုက်မိပါတော့တယ်။
အော်..အပြောလွယ်၊Share ဖို့လွယ် သလောက် အကျင့်ခက်ပါကလား………
အာတီဒုံဂျီး ကားစီးနိုင်ဂျောင်း ကြွားတာရား။ ရွှေခယ်ဓါးဒွေမှ ကားစီးနိုင်ဒယ် ထင်ဓရား…
အပြောလွယ်တာ share လွယ်တာ စိတ်ပါ။
စိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဝိပဿ နာကျင့်မှပြင်နိုင်တာဆိုတော့
စနစ်တကျတန်းစီရမယ့်နေရာတွေမှာ ၀င်တန်းမစီဘဲ ကျော်ခွဖြတ်ဝင်ရှေ့ရောက်ချင်တဲ့ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်တွေကို အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားနဲ့ထိုအသိုင်းအ၀ိုင်းကသူတွေ ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ စရိုက်အကျင့်တွေသည် မြန်မာ့လောက တစ်ခွင်ကို အကျဉ်းတန်စေတုန်းပါဘဲလေ။
အဲဒီအကျင့်တွေ မြန်မာပြည်မှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ပြင်လာကြတဲ့တစ်နေ့သည် ရွှေခေတ်ပင်ဖြစ်လိမ့် မည်သာတည်း။
မျှဝေတာရဖူးမှ ကိုယ်ကလည်း မျှပေးချင်စိတ်ပေါ်တတ်တာကိုးလေ။
အင်းးး ဒီခေတ်ကြီးက… အရှုပ်ကြီးထဲမှာ ရှင်းအောင် နေဖို့ တော်တော် မလွယ်… ။
ဟုတ်ပ အန်တီဒုံရေ…အပြောလွယ်သလောက် ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံကြဖို့တော့ ခက်တယ်…
စာရေးစာဖတ် ဂရုနဲ့ ပေ့(ချ) မှာရှယ်ပေးပါအန်တီခင်ဗျာ
တန်းတူညီမျှမှု(ခွင့်တူညီမျှမှု)ဆိုတာ.. လူသားမှာ.. အရေးအကြီးးးးးးးးဆုံးတခုလို့ထင်မိတယ်..
ကုသမဂ္ဂရဲ့.. လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းမှာလည်း.. ပထမအပိုဒ်…။
ဖြစ်နေသမျှ.. ကမ္ဘာပဋိပက္ခတွေမှာရော.. မြန်မာ့ပဋိပက္ခတွေမှာရော.. ဒါက ထိပ်ဆုံးလက်သည်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်…။
မြန်မာတွေ အစီအစဉ်အတိုင်း.. တန်းစီစနစ်အတိုင်း ဘာလို့မလိုက်သလည်းတွေးကြည့်မိတော့… အရင်ကတော့.. စစ်အစိုးရရဲ့.. စစ်သားတွေ.. အရပ်ဖက်အလုပ်တွေမှာ.. ရာထူးဖြတ်ဝင်ယူတာက.. အကျင့်ဆိုးစတယ်လို့ထင်မိတာ.
နောက်တော့မှာ.. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ ထိုင်ရက်သားကြီးပါလားလို့.. သွားတွေ့မိတယ်..
ရှေး အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူနွယ်အယူတွေမို့.. ဇတ်ခွဲတာကနေ… အရကောက်ပြီး.. လူကို .. တန်းတူညီမျှမှုမရှိ.. အဆင့်ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်တာကိုး..။
ဒီအကျင့်ဆိုးက.. ပညာရေး.. ကျမ်းမာရေး..နိုင်ငံရေးအကုန်မှာသွားရိုက်ခတ်တယ်..။
နောက်ဆုံး.. တန်းစီရမယ့်နေရာ တန်းမစီ..ငါက.. ဘုန်းကြီးမို့.. ငါက..၀န်ကြီးမို့.. ငါက.. အသက်ကြီးလို့…ငါကဟိုအကောင်ကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်လို့…။ ငါက..ငါမို့လို့.. ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ရော…။
ဒီဓလေ့ကို.. ပြင်မှ.. ရမယ်…ထင်…။
The quotation “All men are created equal” has been called an “immortal declaration”, and “perhaps [the] single phrase” of the American Revolutionary period with the greatest “continuing importance”. Thomas Jefferson first used the phrase in the U.S. Declaration of Independence.
`တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ၊တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊ များလူခပ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊ ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊ တို့ပြည်တို့မြေ၊ ပြည်ထောင်စုအမွေ အမြဲတည်တံ့စေ၊ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ´
ထေရဝါဒဘာသာဆိုတာ မယုံကြည်တဲ့သူတွေ အတွက်မဟုတ်ပါ။
ယုံကြည်သူတွေအတွက်ပါ ။ ထေရဝါဒဘာသာ နဲ့ တော့မဆိုင်ပါ။
ဝါဒသုံးမျိုး မပယ်ရှားနိုင်သူတွေ များနေလို့ ပါ။
ပါးစပ်က ပြောတာသာ လွယ်ပါတယ် ။
တကယ် ယုံကြည် တာက အနည်းငယ်မျှသာ ရှိနေလို့ ပါ။။
ယုံတာက သဒ္ဓါတရားပါ ။ ကြည်တာက စိတ်နှလုံးကြည်လင်တာကိုပြောတာပါ ။
ထေရဝါဒ ဘာသာ ကိုးကွယ်တယ် ပါးစပ်ကသာပြောပြီး ၊ သဒ္ဓါတရား နည်းပါးနေသရွေ့ ယုံတယ်ပြောလို့ 
မရနိုင်သလို ၊ စိတ်ကြည်လင်ဘို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါ ။ တကယ် မယုံကြည်ကြလို့ သာသနာ ညစ်နွမ်းရပါတယ်။ ဘာသာ နဲ့ တော့မဆိုင်ပါ ။။
-ကျော်ချင်ခွချင်ကျပုံများ..စီးတီးမတ်မှာ ဈေးဝယ်တာတောင်..ကျမ၀ယ်ထားတာ တစ်ခုနှစ်ခုထဲမို့ -အရင်ရှင်းပေးပါဆိုပီး..အထုပ်တွေ ကောင်တာပေါ်ပစ်တင်တတ်တဲ့ အန်တီကြီးတွေ နဲ့ ကြုံရတာ ၂ခါမက -၃ခါမက..တော်သေးတယ်..ကက်ရှာတွေက အစဉ်လိုက်ဘဲရှင်းပေးလို့ :-/
ကျော်မယ် ခွမယ် ဖြတ်မယ် လုမယ်….ဆိုတာတွေက
ကိုယ်ရော စိတ်ပါ မပြည့်ဝနိုင်သေးသရွေ့ ကြုံနေကြရအုံးမှာပါပဲ။
ပြောရရင်တော့ ဆင်းရဲခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ။
ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆင်းရဲတာရော၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆင်းရဲတာရောကို ဆိုလိုတာ။
ကိုယ်ပိုင်တာဆိုလို့ လေးပေခြောက်ပေတောင် မီးသဂြိုလ်ရင်ရှိတော့မာမဟုတ်…
စပါးပင်ကြီးက မျိုးစေ့တွေက နောက်စပါးပင်ငယ်လေးတွေပေါက်သလို မတူတာလဲမဟုတ် တူတာလဲမဟုတ် ကိုယ်ပြုသမျှကံသာ စပါးမျိုးစေ့လိုနောက်ကထပ်ကြပ်မကွာလိုက်မာ……
ကျားဖူးတာလေးပျောကျိတာ… ဟိ… နာကွ
မာလာလာဝါး (မွတဲ၊ မွမွ၊ ချွိတို့နဲ့အားကျမခံ) ဘာရမလဲ